Egwuregwu bọọlụ ise kacha mma maka Android | Androidsis
Egwuregwu bọọlụ 5 kacha mma maka gam akporo
Aaron Rivas | | Egwuregwu gam akporo, Mobiles
Bọọlụ bọọlụ bụ otu egwuregwu kacha atọ ụtọ n'ụwa, ọ bụghị n'efu, bụ ụlọ ọrụ na -ebugharị ọtụtụ ijeri dollar kwa afọ, yana mbinye aka nke ndị egwuregwu na klọb dị mkpa nwere ụzọ dị mkpa. Maka otu ihe kpatara ya, enwere ọtụtụ egwuregwu mkpanaka egwuregwu a, maka consoles na kọmputa yana maka ekwentị mkpanaka na nyiwe ndị ọzọ.
Egwuregwu bọọlụ Bighead bụ ụfọdụ egwuregwu kacha atọ ụtọ ma na -egwu taa. Site na mkpụrụedemede na ọmarịcha ọdịdị na -atọ ọchị, egwuregwu ndị a bụ ihe kacha ebudata na Storelọ Ahịa Play. Ọ bụ ya mere anyị ji depụta ugbu a egwuregwu egwuregwu bọọlụ isi ise kacha mma maka gam akporo. N'ezie, tupu ịga ya, ọ dị mma ịmara na ha nweere onwe ha, n'aka nke ha, ndị nwere ezigbo aha na ụdị ha.
N'okpuru ị ga -ahụ usoro egwuregwu bọọlụ ise kachasị elu maka nnukwu isi ma ọ bụ isi maka ekwentị gam akporo. Ọ dị mma ịmara, dịka anyị na -eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
Otú ọ dị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ micropayment dị n'ime, nke ga -enye ohere ịnweta ọdịnaya dị n'ime ha, yana inweta ohere egwuregwu na ọkwa, ọtụtụ ihe, ihe nrite na ụgwọ ọrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ikwughachi ya. Ugbu a ee, ka anyị nweta ya.
1 Isi bọọlụ 2 - Egwuregwu bọl na-adị n'ịntanetị
2 Isi Egwuregwu LaLiga - Egwuregwu Football 2021
3 Popet Soccer agbachitere - League
4 Isi B ol
5 Nwa nkịta puppet 2014 - bọọlụ
Isi bọọlụ 2 - Egwuregwu bọl na-adị n'ịntanetị
Isi bọọlụ 2 - Egwuregwu bọọlụ dị n'ịntanetị emeriela ọkwa mbụ na mkpokọta mkpokọta egwuregwu bọọlụ kachasị mma maka ịbụ otu nwere nnukwu obodo na ụdị egwuregwu na -enye gị ohere isoro ndị enyi gwuo egwu site na Facebook naanị site na iji akaụntụ. Nke ahụ, n'otu oge ahụ, na -eme na -atọ ụtọ ma na -asọ mpi, n'ihi na ọ bụghị naanị na -egwu ya, kamakwa megide ezigbo ndị mmadụ.
Ị nwere ike igwu egwuregwu 1v1 na ndị egwuregwu si n'akụkụ ụwa niile, nke na -eme ya ọbụna ihe na -atọ ụtọ. N'ezie, enwere ọtụtụ ndị egwuregwu nwere ahụmịhe dị elu, yabụ na ị ga-eme ihe iji nwaa ịkụ ha ihe, ihe na-anaghị agwụ ike n'ihi egwuregwu bọọlụ nwere isi.
Ị nwere ike ịsọ mpi 5 klọb dị iche iche, yana otu egwuregwu iri na ise dị iche iche, wee tụọ onwe gị n'ọkwa ntozu nke ọtụtụ ndị egwuregwu si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa na-asọ mpi. Ị nwekwara ike sonye na ọnọdụ ọrụ, site na nke ị nwere ike nweta ma mepee ego pụrụ iche, mkpụrụedemede na ngwa.
Enwere mkpụrụedemede 125 dị maka ịhọrọ site na ụtọ na mmasị gị. Soro ha gwuo egwu wee bụrụ onye egwu kacha mma Head Ball 2. Mepụta otu kachasị mma n'ụwa wee bụrụ nke kacha ike. Ọzọkwa ị nwere ike melite agwa gị, ka ị wee nwekwuo ọfụma mgbe ị na -agba ihe mgbaru ọsọ, iji jiri nnukwu ike (dị 18) ga -enyere gị aka n'egwuregwu ahụ. Akụkụ ọzọ na -atọ ụtọ nke aha a bụ na enwere ike ịkpọghe ámá egwuregwu na ndị fan dị iche iche, nke na -egbochi ka egwuregwu ghara ịdị oke egwu.
Isi bọọlụ 2 - bọọlụ dị n'ịntanetị
Isi Egwuregwu LaLiga - Egwuregwu Football 2021
Anyị na -aga n'egwuregwu nke abụọ na nchịkọta mkpokọta a, nke nwekwara obodo ndị egwuregwu buru ibu nke ukwuu, ọ bụ n'ihi na o nweela ihe karịrị nde nde 10 ebudatara na Google Play Store maka gam akporo. Kpọsị, anyị na -ekwu maka ya Isi bọọlụ LaLiga.
Nke a bụ egwuregwu bọọlụ ọzọ dị oke egwu Ọ nwere eserese na eserese zuru oke yana, dị ka ihe kacha adọrọ mmasị ya, ọ nwere ndị egwuregwu ama ama na ama ama n'ụwa niile dịka Luis Suárez na Karin Benzema, ebe ọ na-enye kpakpando niile nke La Liga Spanish, La Santander.
Otu njiri mara ya bụ nke ahụ ị chọghị njikọ ịntanetị iji gwuo egwu. Ị nwere ike ime ya na -anọghị n'ịntanetị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, wee sonye na asọmpi na asọmpi ama ama nke nwere ụfọdụ ihe isi ike, ihe na -eme ka ọ bụrụ ihe na -atọ ụtọ karịa. Ma nke ahụ bụ iji merie ihe niile ma ọ bụ, opekata mpe, ọtụtụ asọmpi, ị ga -emeziwanye nka gị, ihe a na -enweta site na ịkpọghe ụgwọ ọrụ na ihe nrite, yana ime ọtụtụ ihe. Nke ahụ na -agbakwụnye mmetụ ntụrụndụ ya.
Egwuregwu bọọlụ a nwere nnukwu isi na-enyekwa gị ohere ịkwalite nkà nke onye ọkpụkpọ ọ bụla ahọpụtara, yana ọsọ ha, gbaa na ebumnuche, nha, ima elu na ihe ndị ọzọ. Site na nke a ị ga -enweta mmeri n'ụzọ dị mfe karị. E nwekwara ike dị iche iche dị n'ịgba mgbagharị nke na -eme ka mgbọ na ihe mgbaru ọsọ dị ike, dị ka nnukwu bọọlụ, bebi mbibi, Gigantation, na Super Shot.
N'aka nke ọzọ, na Head Football LaLiga ị nwere ike imepụta ma dezie mkpụrụedemede; Mee otu dị ka gị ma mee ya onye na -aga n'ihu otu gị!
Popet Soccer agbachitere - League
Asọmpi bọọlụ Puppet - Njikọ bụ egwuregwu bọọlụ ọzọ mara mma nke ukwuu, nke nwere agwa na -atọ ọchị n'ezie na akara ngosi sitere na bọọlụ ụwa. Nwa nkịta ya nọ ebe ahụ iji soro ndị na -emegide gị na -asọrịta mpi siri ike; jikwaa ha ka ha bụrụ ndị meriri n'asọmpi niile ha na -egwu.
Aka na karịa ndị isi bọọlụ iri itoolu, yabụ ị nwere ụdị egwuregwu dị mkpa ịhọrọ site na ya. Ọ nwekwara ihe karịrị otu egwuregwu bọọlụ 30, nke ọ bụla ka ibe ya mma. N'otu aka ahụ, ọ na -egosi egwuregwu dị mfe, mana, agbakwunyere na eserese na eserese egwuregwu, ọ na -atọ ụtọ nke ukwuu.
N'aka nke ọzọ, Puppet Soccer Champions - Njikọ nwere ọnọdụ ọkpụkpọ abụọ, nke enwere ike ịkpọ ya n'otu mkpanaka gam akporo, mana na ihuenyo nkewa, n'ezie. Na mgbakwunye, ike egwuregwu dị iche iche; ị nwere ike dribble, gafee, tụọ ihe mgbaru ọsọ dị egwu, mebie ihe na ihe ndị ọzọ. Ọ na -enyekwa ohere ịhazi egwuregwu na njikwa yana chepụta atụmatụ egwuregwu dị mma nke ukwuu, iji merie asọmpi na asọmpi.
Dị ka a ga -asị na nke ahụ ezughi, na mgbakwunye ụgwọ ọrụ na ihe nrite, enwekwara nka na -eme ka onye mmegide gị nwee ihe isi ike n'ụlọ ikpe; jiri ha mee ihe ma melite nsonaazụ gị. Ọ nwekwara ahịa dị n'ime ebe ị nwere ike iji ola diamond zụta ihe dị iche iche ị nwere ike nweta oge na naanị site na igwu egwu.
Ndị mmeri bọọlụ Puppet
Isi B ol
Isi bọọlụ bụ otu egwuregwu bọọlụ nwere isi nwere nnukwu isi, n'agbanyeghị na ọ na-ewere ọnọdụ nke anọ na nchịkọta mkpokọta a. O nwekwara otu ihe na -atọ ụtọ nke na -akwado ya site na egwuregwu egwuregwu ya dị elu, ihe na -atọ ụtọ, ọmarịcha yana eserese na -atọ ụtọ, otu n'ime ike bọọlụ isi, obi abụọ adịghị ya.
Egwuregwu bọọlụ a nwere isi Ọ na -abịa ihe dị ka nwa bebi 89 ma ọ bụ avatars ịhọrọ site na igwu egwu. Ọ nwekwara ụdị egwuregwu asaa dị iche iche na -atọ ụtọ, nke bụ Arcade, Asọmpi, Ịlanahụ, Njikọ, Iko Isi, Ọnọdụ Ọnwụ na Ọnọdụ ọgụ. Na mgbakwunye na nke a, ọ dakọtara na ọtụtụ mmadụ n'ịntanetị site na ọrụ Google Play ma nwee mmegharị na ihe nkiri dabere na physics, yabụ emepụtara ahụmịhe egwuregwu nke ọma.
N'aka nke ọzọ, bụ otu n'ime aha ebudatara na akpọrọ na ekwentị mkpanaka gam akporo, yana ihe karịrị nde 50 na nbudata na aha kpakpando 4.2 dabere na ihe karịrị nde na nde XNUMX na ụlọ ahịa Google Play. Ya mere, ọ bara uru ịnwale.
Developer: Nrọ D&D
Nwa nkịta puppet 2014 - bọọlụ
Iji mechaa ndepụta egwuregwu bọọlụ isi kacha mma maka gam akporo, anyị nwere: Egwuregwu bọọlụ puppet 2014, utu aha ọzọ magburu onwe ya iji nyefee oge ma gbuo ike ọgwụgwụ mgbe anyị na -egwu otu egwuregwu kacha amasị na elele n'ụwa, mana site na mmetụ amara ya.
Iko mbaụwa amalitela, na enwere mba na otu iri atọ na abụọ ga -anọchite anya ọkọlọtọ ha n'asọmpi asọmpi siri ike na onye ọ bụla chọrọ imeri. Ebumnuche gị na ebumnobi gị bụ iji obodo gị merie ya, maka nke a ị nwere ike iji kpakpando na ndị egwuregwu nwere akara ngosi nwere ikike dị egwu nwere ihe niile ọ ga -ewe iji merie asọmpi a. Ajụjụ bụ: ị nwere ihe niile ọ ga -ewe maka ya?
Gwuo ma melite nke nta nke nta, ka ị na -eche mba ndị ọzọ ihu na asọmpi ebe enweghị ohere maka ndị meriri. Gosi ihe emere gị wee merie mmeri dị ka onye mmeri. Na karịa ndị egwuregwu 90 n'egwuregwu ahụ, niile n'ụdị nnukwu isi na -atọ ọchị, mana nwere ikike dị ịtụnanya. Enwekwara ọtụtụ ike, dị ka chịngọm, ice, slime sock, plasta, super / mini power, na jump spring, nke ị ga -eji merie ndị gị na ha na -asọ mpi.
Egwuregwu bọọlụ ukwu a maka ekwentị gam akporo nwere customizable njikwa, ntọala dị iche iche na eserese mara mma na ihe ọchị. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, ụda ụda ya na -atọ ụtọ ma na -adọrọ adọrọ.
Bọọlụ Nwatakịrị - Bọọlụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu bọọlụ 5 kacha mma maka gam akporo
Mobiles iri kacha arụ ọrụ nke ọma na Septemba 10
Nhọrọ anọ kacha mma maka Tinder maka ekwentị gam akporo